Umsayino wePark Grande-Ipholile, icocekile kwaye iWifi yasimahla
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguHappy
Entsha eFanelwe ngokuPheleleyo ye-2BR uMsayino wePaki yeGrande yeApartment yeMT. IHaryono yindawo yokuhlala edibanisa induduzo kunye nokulula ekufikeleleni kokuhamba. Ke, abahlali banokufikelela ngokulula kwizakhiwo ezahlukeneyo zeofisi kunye neziko leshishini.
Iyunithi yenziwe lula nge-wifi, i-smart TV ibandakanya i-youtube kunye ne-Netflix.
Le yunithi yezindlu inamagumbi okulala ama-2. Igumbi lokulala eliphambili liququzelelwa ngebhedi yobukhulu bokumkanikazi, idesika engamampunge, i-AC, kunye newadilophu. Ngelixa kukho iibhedi ezi-3 zesayizi enye kunye newodrophu kwigumbi lesibini. Kukho igumbi lokuhlambela elinye kuphela eliza neshawa, isinki yokuhlambela, kunye nezinto zangasese. Ukungena kwigumbi lokuhlala, kukho isofa, iTV, ifriji, itafile kunye nesitulo sebar esinokusetyenziswa njengetafile yokutyela. Ikhitshi alikho kude negumbi lokuhlala. Ikhitshi elilula kunye netafile efana nesitovu segesi, isitovu serayisi siyafumaneka.
kukho iindawo zokutyela ezininzi, imarike encinci, ivenkile yeziyobisi. kukho ichibi lokuqubha kunye nendawo yokuzivocavoca
Iyunithi yeApartment edibanisa induduzo kunye nokufikelela ngokulula kokuhamba kukulungele abantu basezidolophini. Entsha eFanelwe ngokuPheleleyo ye-2BR uMsayino wePaki yeGrande yeApartment yeMT. Haryono